Reach7: Bandakanya Izithameli Ezikhuluma Izilimi Eziningi Kwezokuxhumana | Martech Zone
Finyelela ku-7 ifuna ukwenza kube lula ngabantu ngabanye namabhizinisi ukukhulisa ukufinyelela kwabo kwezenhlalo emhlabeni wonke. NgeReach7, abasebenzisi bakhomba futhi bahlanganyele nezithameli ezifanele kakhulu kwimidiya yezenhlalo kalula nangendlela efanele.
Ipulatifomu yabo isiza abasebenzisi ukwakha izithameli ezifanele emakethe yabo yasendaweni noma basebenze ngempumelelo ukuzibandakanya nemakethe yomhlaba. Amabhizinisi noma abantu ngabanye bangathola ama-tweets ngezilimi ezingaphezu kwezingu-80 ezikhulunywa kakhulu emhlabeni. Ukuhumusha okungu-90% kuqediwe kungakapheli ihora, okuningi kungakapheli imizuzu.
Izici ezingeziwe ze-Reach7
Ukukhula kwabalaleli - Khula ngokubandakanya okubhekiswe kubo. Khomba abantu nokuqukethwe ongakulandela, ukuthanda nokwabelana.
Izinga lokuhambisana - Gcina isikhathi ngokuhambisana kwethu okuhlukile okukuthola imiphumela emihle.
Linganisa Impumelelo - Ubufakazi bukupudding. Thola izibalo zansuku zonke, zamasonto onke zokuthi ukubandakanyeka kwakho kuholela kanjani kubalandeli abasha.
Yenza i-Twitter ibe yendawo - Finyelela izimakethe ezingaphezu kwezingu-80 + ngokuhumusha komphakathi kwezokuxhumana okwakhiwe ngaphandle.
Izilaleli Eziyingxenye - Hlukanisa amaqembu wakho wezethameli ohlosiwe abe imikhankaso ukuze ukwazi ukugxila emaqenjini ahlukene ngezinsuku ezahlukahlukene.
Ucwaningo - Bona i-footprint ephelele eku-inthanethi yabo bonke abantu abafanelekile njenge-LinkedIn yabo, ibhulogi, iPinterest njll.
Zama i-Reach7 Mahhala
I-Reach7 nayo ine-I-Hootsuite I-plugin, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngqo kusuka ku-I-Hootsuite ideshibhodi ukuhlela nokushicilela amaTweets.
I-Reach7 inikela ngezinhlelo ezintathu:
Uhlelo lwe-Starter, insiza yamahhala elungele abantu abafuna ukukhulisa ukuzibandakanya kwabo kwezokuxhumana.
Uhlelo Oluphelele, $ 19.99 / ngenyanga, lulungele amabhizinisi, izinkampani ze-e-commerce, neminyango yokuthengisa edinga ukubandakanya izithameli ezihlosiwe ezinkundleni zokuxhumana.
Okokugcina, uhlelo lwePro ku- $ 59.99 / ngenyanga lungcono kakhulu kumabhizinisi anezigaba eziningi zabasebenzisi ezimakethe ezingaphezu kweyodwa, kanye nabaqashi kanye nama-ejensi amancane.
I-Reach7 inamakhasimende angaphezu kuka-5,000 XNUMX, inombolo ekhula nsuku zonke futhi ifaka izinkampani ezifana neWorldpay, Re / Max, Sharp, neViking Direct.
Tags: i-plugin ye-hootsuiteukuhumusha komuntuamazwe omhlabaulimi oluhlukahlukeneIzilimi eziningiukufinyelela7social mediaukuzibandakanya kwezokuxhumanaukuhumushaTweetTwitterukwenziwa kwe-twitter